गर्भावस्थामा गर्नुपर्ने योगासन - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ योग ∕ गर्भावस्थामा गर्नुपर्ने योगासन
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७९ जेठ ३ गते, ०५:३९ मा प्रकाशित
गर्भावस्थाको पूरा ९महिना विशेष स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भावस्थाको समयमा शरीरमा धेरै परिवर्तनहरु हुन्छन्। यी परिवर्तन हर्मोनल छन्। केहि गर्भवती महिलाहरुलाई उल्टी, थकान, ढाड दुख्ने, पेट दुख्ने, मर्निंग सिकनेस, सुजन आदि समस्या देखिन सक्छ।
यी सबै समस्याहरु धेरै सामान्य हुन् । जुन सामान्यतया गर्भवती महिलाहरुलाई हुन्छ। यी स-साना समस्याहरुले पनि महिलाहरु लाई धेरै असहज महशुस गराउन सक्छ। यी समस्याहरुबाट बच्नको लागि योगासनले पनि ठुलो भूमिका खेल्दछ।
केही महिलाले शारीरिक पिडा हुँदा विना सल्लाह पेन किलर औषधी लिने गर्छन। जो शिशुका लागि हानिकारक हुनसक्छ। गर्भवास्थामा योग गर्नु निकै फाइदा जनक मानिन्छ।
१. मर्निंग सिकनेसका लागि चाइल्ड पोज
केहि महिलाहरुलाई धेरै बिहान उठ्दा धेरै समस्या हुन्छ । कसैलाई टाउको दुख्ने र कसैलाई माइग्रेनको दुखाई बढ्छ। यसका लागि बच्चाको मुद्रा योग अभ्यास गर्नुहोस्। यसो गरेर, उल्टी, वाकवाकी, चक्कर आउने जस्ता समस्याहरुलाई कम गर्न सकिन्छ।
२. खुट्टामा सुनिने समस्या हट्उन पर्खाल योग अभ्यास
गर्भवती महिला प्राय खुट्टा सुनिने समस्याबाट ग्रस्त हुन्छन्। यस्तो स्थितिमा तपाईले पर्खाल योगको अभ्यास गर्न सक्नु हुन्छ। यसलाई गर्न निकै सजिलो हुन्छ। सबै भन्दा पहिले तपाइ कम्मरको सहयताले पछाडि सुत्नुहोस। दुबै खुट्टा भित्तामा माथी राख्नुहोस्। तपाइँ यो १५/१५ मिनेटको लागि एक दिनमा दुई पटक अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ।
३. कम्मरको दुखाइबाट छुट्कारा
धेरैजसो महिलाहरु गर्भावस्थाको बेला कम्मरको दुखाइबाट पीडित हुन्छन्। विशेषगरी, गर्भावस्थाको तेस्रो तीन महिनामा। यो दुखाईबाट छुटकारा पाउन पर्खालको योग गर्न सक्नु हुनेछ। पहिले तपाइ आफ्नो घुँडाको बलमा बस्नुहोस् । अब दुबै हात पछाडि लिनुहोस्। हातलाई जोड्नुहोस। अब ३०सेकेन्डको लागी एक गहिरो श्वास लिने र हातलाई खोल्ने गर्नुहोस। यसले कम्मर दुखाइ कम हुन्छ।
महानगरको कमाण्ड लिन तम्सिएका रक्तदाता प्रेमसागर, भन्छन्, ‘वृद्ध-वृद्धालाई घर घरमा उपचार, नि:शुल्क रगत’